‘अभाव भएकै ठाउँमा अबसर हुन्छ’ : युवा उद्यमी श्रेष्ठ - Pairavi Online
२०७७ जेठ ३ गते शनिवार ०९:४० मा प्रकाशित
१२ महिना, ३ दिन, ११ घन्टा अगाडि
३०२ जनाले हेरिएको
प्यूठान जिल्लामा विद्युत भित्रिएको झण्डै चार दशक पुग्न लागेको छ । यो अवधिमा जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्ने क्रम बढ्दो छ । विद्युतीय सामाग्रीको माग दिनप्रतिदिन बढ्न लागिरहेको छ । विद्युतीय सामाग्रीको व्यापारमा राम्रो भविष्य देखेर यो व्यवसायमा २० वर्षकै कलिलो उमेरमा जोडिएका युवा उद्यमी हुन् अरुण कुमार श्रोष्ठ । काठमाण्डौमा अध्ययन गर्दा पकेट मनीको रुपमा आम्दानी गर्ने हिसावले कम्प्युटरको व्यापार थालेका युवा उद्यमी १२ वर्षदेखि प्यूठानको बाग्दुला र बिजुवारबाट विद्युतीय समाग्रीको व्यापार गर्दै आइरहेका छन् । अरु व्यवसायीको तुलनामा टिम वर्कमा काम गर्न रुचाउने युवा उद्यमी श्रोष्ठ विभिन्न पुरस्कार तथा सम्मानबाट समेत समय समयमा पुरस्कृत हुने गरेका छन् । उनै युवा उद्यमी अरुण कुमार श्रोष्ठसँग प्युठानका अग्रज पत्रकार सञ्जय रिजालले कामना डेलीका लागि गरेको कुराकानी ।
यहाँको जन्म कहाँ र कहिले भयो ?
मेरो जन्म प्यूठान नगरपालिका वडा नं. ४ विजुवारमा २०४४ सालमा भएको हो ।
यहाँको मुख्य रुचीको विषय के हो ?
मलाई रुची व्यवसायमै छ । व्यवसायमै केन्द्रित गरेको छुँ । नयाँ कामहरु पनि शुरुवात गर्नुपर्छ भनेर सोचिराखेको छुँ । यो व्यवसायमा लागेको १२ वर्ष जति भयो । व्यवसायमा विभिन्न परिवर्तन भइराखेको हुन्छ । अपडेट गरिराखेको छुँ ।
धेरै युवाहरु उद्यममा नलगोर विदेशमा पलायन भइरहेका छन् । नेपालमा काम गर्ने राम्रो वातावरण छैन भन्नेहरु पनि धेरै छन् । त्यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि यहाँ प्यूठानमा बसेर उद्यममा लाग्नुभयो ? यसमा लाग्नमा यहाँलाई के कुराले प्रेरित ग¥यो ?
अरुलाई दोष दिनुभन्दा पनि आफैले फिल्ड रचना गर्ने हो, खोज्ने हो । सम्भावना खोज्ने हो । सबै कुरामा अरुलाई दोष दिएर अरुले गर्देला भनेर भएन । अभाव भएको ठाउँमा अवसरको सम्भावना पनि हुन्छ । त्यो भएको कारण हाम्रो देशमा धेरै सम्भावना छ। सम्भावना त मैले धेरै नै देख्छु । गर्न सक्नुप¥यो । सबै कुरा तयार भएर त आउँदैन नि ।
प्यूठान जिल्लाको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरी यहाँले जस्तो विद्युतीय सामाग्रीहरु जस्तो कम्प्प्युटर र सूचना प्रविधिका सामाग्रीहरुको व्यापार शुरु गर्नुभयो । यो व्यवसाय नै यहाँले रोज्नुको कारण के होला ?
म थापाथलीमा पढ्ने समयमा न्युरोडमा पकेट खर्चको लागि काम गर्ने गर्दथे । त्यो बेला मैले कम्प्युटरको सप्लाई प्यूठानमा गर्थे । त्यतिबेला सम्म प्यूठानमा कम्प्युटरको बजार विकास भइसकेको थिएन । पहिलेदेखि नै अलिकति पिछडिएको जस्तो ठाउँ थियो । त्यतिबेला टाइपराइटरहरु थियो । यहाँको मानिसहरुको पहुँच कम्प्युटरमा त्यति थिएन । पुरानै विन्डोजमा काम गर्ने बातावरण थियो । अहिले पनि दुरदराजका क्षेत्रका घर घरमा कम्प्युटरको पहुँच भएको छैन । मोवाइलले गर्दा धेरै मानिसलाई सहजता भएको छ । कम्प्युटर पढ्न भनेर बाहिरै जाने चलन छ नि त अझै पनि । त्यसो भएको कारण मैले सम्भावना देखेर यो व्यवसाय गरौं भनेर लागे । अनि अर्को तर्फ गाउँमा के थियो भने एउटा मात्र व्यवसाय गरेर नहुने । त्यसो भएको कारण मैलै सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक्स समाग्रीहरु त्यसमा समेटेर मान्छेलाई सबै कुरा एकै ठाउँबाट दिऊ भन्ने हिसावले यो क्षेत्रमा अलिकति आकर्षित भएको हो ।
व्यवसाय गर्नेहरु प्रायः अलि बढि व्यस्त देखिने गर्दछन् तर तपाई बेला मौकामा नेपालका विभिन्न पर्यटकिय स्थलसहित विदेशतिर पनि घुमिराख्नुभएको हुन्छ । यो घुम्ने समयको लागि कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
व्यवसायमा अरुलाई विश्वास गर्ने वातावरण पनि हुनुपर्छ । किनभने मैले पनि तल्लो तहबाट काम गरेर आएको हुनाले हामीले हाम्रो वर्करलाई वर्कर भन्दा पनि पार्टनरको रुपमा लिन सक्यो भने काममा राम्रो लगाव पनि हुनसक्छ । समय भनेको त आपूmले निकाल्ने हो । तपाई सधै त्यहि बस्छु भनेर पनि हुँदैन । आपूmले अरुलाई विश्वास गर्न सिक्नुपर्छ । त्यो भएपछि समय निकाल्न सकिन्छ । हामीले अरुलाई त्यतिकै विश्वास दियौ भने उसलाई पनि लाग्छ नि । जे होस उसले जिम्मेवारी बोध गर्छ ।
यहाँको समूहमा काम गर्ने कति जना हुनुहुन्छ ?
अहिले हाम्रो टिममा नौ जना छौं । मार्केटिङ्गमा चार जना । एकाउण्टमा दुई जना । अर्डर सप्लाई डिस्प्याचमा दुई जना भाइहरु हुनुहुन्छ ।
यहाँले विभिन्न पुरस्कार तथा सम्मान पनि पाउनुभएको छ । एउटा पुरस्कार तथा सम्मानले व्यवसायीलाई कस्तो प्रभाव पार्दो रहेछ ?
धेरै नै प्रभाव पार्दो रहेछ । एउटा कस्तो हुन्छ भने आपूmलाई पनि काम गर्ने जोश जाँगर जागेर आउँछ । यस्तो सम्मानहरुले नयाँ काम गर्न अझ हौसला प्रदान गर्छ । नयाँ काम गर्न खोजिरहेका हुन्छौ । नयाँ भेण्डर साथीहरुदेखि लिएर नयाँ काम हामीले पाउनलाई यसले सहयोग गरिरहेको हुन्छ । हाम्रो व्याकग्राउण्ड बलियो देखाइदिराखेको हुन्छ । त्यसले गर्दाखेरी अझ काम गर्न सहयोग मिल्छ ।
अहिलेको युगलाई डिजिटल युग भनिन्छ । अथवा पेपपरलेस हुँदैछ । यहाले आप्mनो व्यवसायलाई कसरी प्रवद्र्धन गरिराख्नुभएको छ ?डिजिटल युगको लागि हामीले फेसबुकमा हामीले विज्ञापन त गरिराखेका छौं । तरपनि फेसबुकमा हाम्रो त्यति भिवर्स छैन । अहिलेसम्म सात आठ हजार मात्र भिवर्स छ । तर भोलीको दिनमा यसमा सम्भावना छ । त्यो हिसावले पनि हामी डिजिटल प्रविधिमा बिस्तारै पहल गरिराखेका छौं र त्यसको लागि लागिराखेका छौं । विज्ञापनमा पनि हामीले बार्षिक राम्रै बजेट छुट्याएर काम गरिराखेका छौं ।
व्यवसायीहरुले आप्mनो बजार क्षेत्रभित्र आप्mना उपभोक्ताको आवश्यकता के हो भनेर अनुसन्धान तथा सर्भेहरु गरिरहेको पाइन्छ । यहाँले त्यो क्षेत्रतिर काम गर्नुभएको छ कि छैन ?
सर्भे भनेर ठ्याक्कै सर्भे त हामीहरुे गरिराखेका छैनौं । तर हामीले गर्ने सोचमा छौं । ग्राहकको तथ्यांक संकलन गर्ने काम हामीले गर्ने गरिराखेका छौं ।
कुनै ग्राहक तपाईको पसलमा आएर मलाई यस्तो खालको सामाग्री चाहियो भन्यो भने यहाँहरुले त्यो समान उपलव्ध गराउन कत्तिको लविङहरु गर्नुभएको छ ?
विद्युतीय सामाग्रीहरु हामीकहाँ अर्डर आयो भने हामीले सकेसम्म हामीले त्यो उपलव्ध गराउने कोशिस गर्छाै ।
अघि हामीले भने जस्तै यहाँको बजार क्षेत्र तथा ग्राहककोे आवश्यकतालाई ध्यान दिएर कुनै विद्युतीय प्रोडक्ट उत्पादन गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ?
छ, भविष्यमा हाम्रो चाडै त्यस्तो खालको कुराहरु देखिएला । हामीले सोचहरु बनाइराखेका छौं । सानो क्षेत्र भएको हुनाले हामीलाई हाम्रो क्षेत्र सानो लागिराखेको छ । ठूलो ठूलो काम गर्नलाई ठूलो ठूलो क्षेत्र र धेरै जनसंख्याले पनि प्रभाव पार्दो रहेछ । त्यस्तो कुराले गर्दाखेरी हामीलाई काम गर्न अलिकति गाह्रो महसुस भइराखेको छ । तर निकट भविष्यमा हामीले केही नयाँ कार्यक्रमहरु लिएर आउने छौं ।
अहिले यहाँ प्यूठान लगायत अन्य जिल्लामा पनि काम गर्नुभएको छ ?
अहिले हामीले प्रमुख रुपमा काम गरिराखेको जिल्ला भनेको प्यूठान जिल्ला नै हो । प्यूठान लगायत रोल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, दाङको लमही क्षेत्र र कहिलेकाँहि घोराहीसम्म सामानहरु सप्लाई गरिराखेका हुन्छौ ।
यो विद्युतीय सामाग्रीको व्यापार व्यवसाय अरु जिल्लामा पनि बिस्तार गर्ने सोच छ ?
अरु जिल्लामा बिस्तार गर्ने सोच त छ । अलिकति ठूलो क्षेत्रमा जाने सोच छ । बुटवल काठमाण्डौसम्म हुनसक्छ । हामीले अलिकति सानो क्षेत्र भयो भन्ने महसुस गरिराखेका छौं । तिव्र प्रतिस्पर्धाको समय छ । ठूलो भोल्युममा काम गर्न सक्यौ भने हामीले रेट दिन सक्छौं । ब्राञ्चवाइज हामी ब्राञ्च पनि बिस्तार गर्ने सोचमा छौं ।
व्यापार व्यवसाय गर्न यहाँहरुले विभिन्न समस्या छन् । यहाँले त्यस्तो कुन कुन समस्याहरु देख्नुहुन्छ ?
यो वर्षमा आएर धेरै व्यापारीहरुले झेल्नुपरेको समस्या भनेको त करकै हो । भर्खरै भारतको आर्थिक मन्दिको कारण नि बजार सुस्ताएको अवस्था छ । डलरले हामीलाई धेरै प्रभाव पार्दछ । त्यसले गर्दा पनि व्यवसाय सुस्ताएको छ । सरकारी खर्चहरु नभइदिदाखेरी पनि व्यवसायमा अलिकति गाह्रो भएको महसुस गरेका छौं ।
ग्राहकहरुको सन्तुष्टिलाई कत्तिको ध्यान दिनुभएको छ ?
अहिले हामी एउटा ब्राण्ड भइसकेपछि भोलि विहान कमसल कामको समान बेच्दा त्यो ब्राण्डलाई पनि धव्वा लाग्न सक्दछ । त्यो हिसावले गर्दाखेरी अहिले हामीले एउटा सस्तो र राम्रो प्रोडक्ट कसरी दिन सकिन्छ । त्यसमा हामीले आपूmलाई कन्सर्टेड गरेका छौं । हामीले ग्राहकलाई आप्mनो काउण्टरबाट बेच्दाखेरी कम गुणस्तरको सामान सकेसम्म बिक्री गर्दैनौ । मान्छेले सस्तै खोज्छ भने मात्र हामीले त्यो सामाग्री उपलव्ध गराउँछौं ।
यहाँ भर्खरै डिसहोम ताराबाट पनि सम्मानित हुनुभएको छ । डिसहोमले गाउँ गाउँमा टेलिभिजनको सञ्चार गराएको छ । डिसहोम गाउँ गाउँमा पु¥याउन यहाँ सफल हुनुभयो । त्यो हुनुको पछाडिको कारण के होला ?
यो त म एक्लैले गर्दा पनि भएको हैन । मेरो पुरै समूह, तपाईहरु, सबै साथीभाइहरु, अनि सबै जनाले माया गर्दिएर म यहाँसम्म आएको हो । डिसहोम व्यापारी साथीहरुले पनि सहयोग गरेर बेच्दिनुभयो । टेक्निसियन साथीहरु बीचमा परिवर्तन हुँदा पनि त्यतिकै सहयोग गर्दिनुभयो । यो सबैे गर्दाखेरी मात्र सम्भव भएको हो । चाडै नै डिसहोमबाट इन्टरनेट पनि आउने कुरा भइराखेको छ । चाडै नै हामी डिसहोमबाट इन्टरनेट सेवा पनि दुरदराज एरियामा शुरु गर्छौ ।
व्यवसाय प्रवद्र्धनको लागि विभिन्न अभियानहरु गरिरहेको देखिन्छ । यहाँले त्यस्तो अभियानहरु गर्नुहुन्छ ?
प्राविधिक तालिमहरु हामीले बेला बेलामा गर्ने गर्छौ । त्यो बाहेक ग्राहकको लागि त डिस होमको १०० नम्वर च्यानलबाटै प्रशस्त सूचनाहरु दिनभर नै प्रशारण भइराखेको हुन्छ । डिसहोमको अफिसबाट डाइरेक्ट कस्टमरलाई कल हुने गर्दछ । हामीले बेला बेलामा आप्mना कस्टमरहरुलाई तपाईको बक्सको यस्तो यस्तो छ । तपाईको प्याकेज यस्तो यस्तो छ । केही समस्या छन् कि छैनन् भनेर कल गर्ने गरेका छौं ।
व्यापार भनेको फाइदा केन्द्रित मात्र हुन्छ भन्नेहरु पनि छन् । अहिले पछिल्लो समय कानुनी रुपमा पनि सामाजिक हिसावले उत्तरदायी बन्न व्यवसायीहरुलाई उत्प्रेरित गरिरहेको देख्न सकिन्छ । यहाँले यो क्षेत्रमा कत्तिको काम गर्नुभएको छ ?
सामाजिक उत्तरदायित्वको कुरा गर्दाखेरी हामीले आठ नौ जनालाई रोजगारी दिएका छौं । त्यसबाट पनि नौ जनाको परिवार चलेको छ । हुनलाई त्यो सानो होला । यो व्यवसाय जस्तो देखिन्छ । त्यस्तो छैन । त्यसमा अनुदानहरु आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ । जस्तो कतिजनालाई रोजगार दिइराखेको छ । त्यो पनि राज्यको दायित्वभित्र पर्ने कुरा नीजि क्षेत्रले गर्दिराखेको छ । त्यो कुरा राज्यबाट आउनुपर्छ । त्यो कुराहरु हेरेर कस्तो व्यवसायलाई कति कर लगाउने । त्यो करको दर कस्तो हुनुपर्ने भन्ने कुराहरु प्रष्ट रुपमा आउनुपर्दछ जस्तो लाग्छ मलाई ।
अहिले बजारमा कमशल सामानहरु पनि प्रशस्त देखिने गरेका छन् । व्यापारमा प्रशस्त प्रतिस्पर्धा पनि छ । यसको व्यवस्थापन कसरी गरिराख्नुभएको छ ?
हाम्रो काउण्टरबाट सामान बेच्दाखेरी हामी एउटा छानेर यो ब्राण्ड यो सम्म बेच्ने भनेर ब्राण्ड बनाउन सक्छौं । तर बजार यति प्रतिस्पर्धी छ कि । अहिलेको दिनमा मान्छे प्रडक्ट भन्दा पनि प्राइसको पछाडि दौडिरहेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न राज्य नै लाग्नुपर्छ । मलाई कस्तो लाग्छ भने अहिले नेपाल हामी डम्पिङ्ग साइट बनाउँदै छौं । कमसल सामान पनि आयात गर्न दिने प्रवृत्तिले गर्दा । सामानको एउटा ग्रेड हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । आजको दिनमा एउटा सानो उदाहरण आठ सय नौसयमा पनि एउटा मोवाइल आएको छ । त्यो मोवाइल दुई महिना पनि टिक्दैन । भनेपछि हामी के गरिराखेका छौं त ? एउटा मान्छेले वर्षमा त्यो मोवाइल फोन किन्नको लागि वर्षमा चार पाँच हजार खर्च भइराखेको छ । त्यो प्रोडक्ट हामीले डम्पिङ्ग साइटमा राखिराखेका छौं । हामीले अहिले नेपाललाई डम्पिङ्ग साइट बनाइराखेका छौं । त्यसो भएको मापदण्ड बनाएर कमसल गुणस्तरको प्रोडक्टलाई आयातमै रोक लगाउनुपर्दछ जस्तो मलाई लाग्दछ ।
एउटा व्यक्ति सफल उद्यमी हुन यहाँको अनुभवमा एक दुई तीन गरेर भन्यो भने कुन कुन कुरा हुनुपर्छ ?
सबभन्दा पहिलो कुरा भनेको त कन्फिडेन्स हुनुप¥यो । आपूmमा विश्वास हुनुप¥यो । दोश्रोमा जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि निरन्तर क्रियाशील हुनुप¥यो तेस्रोमा आपूmले गरेको कामको मूल्यांकन गरेर कुन ठाउँमा चुक्यौ त्यो क्षेत्रलाई सवल बनाउनुप¥यो ।
हाम्रो कुराकानीमा नसमेटिएको यहाँलाई भन्नै मन लागेको केही कुरा भए भन्न सक्नुहुन्छ ?
अहिले धेरै युवा भाइवहिनीहरुले छोटो बाटोबाट प्रतिफल खोजिराखेका हुन्छन् । जे कुरा पनि तत्कालै आउँदाखेरी राम्रो हुदैन । बिस्तारै लागि पर्नु पर्छ । एक न एकदिन सफल भइन्छ ।
राहात स्वरुप रोजगार, मजदुर भन्छन् ‘अब चुल्हो बल्ने भयो’